Vitamin E 98% mmanụ, DL-Alfa Tocopherol mmanụ - China Toption Industry
【Ngwa】 Vitamin E 98% mmanụ, DL-Alfa Tocopherol mmanụ ọtụtụ-eji N'ihi ihe e wusiri ike nke majarin, mmanụ na abụba, oriri na-edozi ngwaahịa na nwa oriri,-adabara soft Capsule.
【Main Producer】 DSM, ADM, Zhejiang Medicine (ZMC), Brenntag
【CAS Mba】: 9002-96-4
【E Mba】: 302
Deep ihe ọmụma na Vitamin E 98% mmanụ ahịa eme ka anyị nwee isi iyi ị na asọmpi price ex reputable Vitamin E 98% mmanụ Nsukka. Ọ bụrụ na ị na-achọ Vitamin E 98% mmanụ , egbula Email anyị.
Vitamin E nwere ọtụtụ ihe dị mkpa ọrụ;
Nyere ịnọgide na-enwe cell Ọdịdị site echebe cell membranes.
ọ bụ ihe antioxidant na-enyere aka akwụsịlata Filiks na-emebi mkpụrụ ndụ
The ike uru site vitamin E bụ:
Aka egbochi ọrịa obi na ọbara arịa
Eji maka mgbochi nke cancer
Aka ibelata ọbara mgbali elu
Mee iji gbochie ụfọdụ akpụkpọ ọrịa
Nyere na Ogbu
ọdịdị White ma ọ bụ whitelike powder
nnwale > = 50%
Loss on Ihicha = <5.0%
Seive Analysis > = 90% site na Nke 20 (US)
arọ metal = <10mg / kg
arsenic = <2mg / n'arọ
Pb = <2mg / n'arọ
Cadmium = <2mg / n'arọ
Mercury = <2mg / n'arọ
Product nkọwapụta ngwugwu Main Ngwa
DL-Alpha tocopherol acetate 93% Oil 200 / 950kg / drum Maka ojiji na oriri ọkwa.
DL-Alpha tocopherol acetate 98% Oil 20/50 / 200kg / drum N'ihi na ihe e wusiri ike nke majarin, mmanụ na abụba, oriri na-edozi ngwaahịa na nwa oriri,-adabara soft Capsule.
CWS-D 20kg / katọn Ngwa ngwa dispersible mmiri oyi, ya mere ike ga-eji dị ka ihe e wusiri ike nke akọrọ nri na ngwaahịa ndị dị otú ahụ dị ka ntụ ọka, mmiri ara ehi ntụ ntụ, onunu ntụ ntụ.
DL-Alpha tocopherol acetate ike 50% taabụ 50kg / katọn Maka ojiji na mbadamba na ike capsules.
DL-Alpha tocopherol acetate beadlet 50% Tab-B 20 / 50kg / katọn Maka ojiji na ike capsules.
DL-Alpha tocopherol acetate beadlet 75% Tab-B 20 / 50kg / katọn Maka ojiji na ike capsules.
Vitamin E (Mixed tocopherols) 30% / 50% ntụ ntụ 25kg / bag Maka ojiji na nri ma ọ bụ nri ọkwa, tumadi-eji ụmụ anụmanụ na-eri nri.
DL-Alpha tocopherol acetate powder 50% SF 25kg / katọn Maka ojiji na ala ọdịnaya mbadamba na ike capsules.
DL-Alpha tocopherol calcium succinate 96% crystalline ntụ ntụ 25kg / katọn Maka ojiji na mbadamba na ike capsules.
Mixed tocopherol uche 50/70/90% Oil 20/50 / 200kg / drum Eji dị ka ihe antioxidant na mmanụ na abụba, ighe na unsaturated ọdụdụ acid.
D-Alpha tocopherol 1000/1100/1200/1300 / 1409IU 20/50 / 200kg / drum N'ihi na ihe e wusiri ike nke majarin, mmanụ na abụba, oriri na-edozi ngwaahịa na nwa oriri, na-eji na adụ Capsule na dị ka ihe antioxidant na mmanụ na abụba.
D-Alpha tocopherol acetate 1000/1100/1200 / 1360IU 20/50 / 200kg / drum N'ihi na ihe e wusiri ike nke majarin, mmanụ na abụba, oriri na-edozi ngwaahịa na nwa oriri, na-eji na adụ Capsule na dị ka ihe antioxidant na mmanụ na abụba.
D-Alpha tocopherol acetate powder 700 CWS 20kg / katọn Ngwa ngwa dispersible mmiri oyi, ya mere ike ga-eji dị ka ihe e wusiri ike nke akọrọ nri na ngwaahịa ndị dị otú ahụ dị ka ntụ ọka, mmiri ara ehi ntụ ntụ, onunu ntụ ntụ.
D-Alpha tocopherol acetate powder 700 taabụ 20kg / katọn 50kg / drum Maka ojiji na mbadamba na ike capsules.
D-Alpha tocopherol acetate powder 700 SF 25kg / katọn Maka ojiji na ala ọdịnaya mbadamba na ike capsules.
D-Alpha tocopherol acetate beadlet 700 Tab-B 20kg / katọn 50kg / drum Maka ojiji na ike capsules.
D- Alpha tocopherol acetate beadlet 950 Tab-B 20kg / katọn 50kg / drum Maka ojiji na ike capsules.
D-Alpha tocopherol succinate 1210/1185/1185-se 25kg / drum Maka ojiji na mbadamba na ike capsules.
Mmiri soluble (Natural) Vitamin E (TPGS) 25kg / drum 10kg / katọn N'ihi na ihe e wusiri ike nri na ihe ọṅụṅụ, karịsịa maka nri na uzo anya,-adabara soft Capsule.
Akọrọ Vitamin E 50% ntụ ntụ
Vitamin E Powder Food mezuwo